Omume isii kacha mma nke ga - eme ka ndị ahịa gị sonye na ntinye aka. Martech Zone
Omume Kasị Mma nke 6 Nke Ga-abawanye Nsonye Ndị Ahịa Gị
Satọde, Ọgọstụ 27, 2016 Satọde, Ọgọstụ 27, 2016 Mike Jones
Nyocha ndị ahịa nwere ike inye gị echiche ndị ndị ahịa gị bụ. Nke a nwere ike inyere gị aka imeghari, ma dozie onyonyo gị, ọ nwekwara ike inyere gị aka n'ibu amụma banyere ọdịnihu ha chọrọ na mkpa ha. Dunyocha nyocha oge niile ị nwere ike bụ ụzọ dị mma iji nọrọ n’ihu mgbe ọ bịara n’ihe omume na ihe ndị ahịa gị chọrọ.
Nnyocha ndị ahụ nwekwara ike ịkwalite ntụkwasị obi ndị ahịa gị, na n'ikpeazụ, iguzosi ike n'ihe, ebe ọ na-egosi na i nwere ezigbo mmasị n'echiche ha, ị na-etinyekwa mgbalị iji mejuo ha. Jide n'aka na ị gwara ndị ahịa gị maka mgbanwe ndị ị mere, dabere na nzaghachi ha. Ma ọ bụghị ya, mgbalị gị na-etinye ihe ize ndụ nke ịghara ịchọpụta. Ndị mmadụ na-achọkarị cheta ihe na-adighi nma karịa ndị dị mma, yabụ enwere ike ịhụ mmezi, naanị n'ihi na ndị ahịa gị nwere ike ịdị jụụ. N'otu aka ahụ, ọ nwere ike iweghachite ụfọdụ ndị ahịa ị furu efu, ma ọ bụrụ na enweghị afọ ojuju na azụmaahịa gị.
Nzaghachi ziri ezi na nyocha ndị ahịa nwekwara ike ịba okpukpu abụọ dị ka nyocha ụlọ ọrụ. Ọ bụ n'ezie a mma ọzọ ka ebipụta akwụ ụgwọ ma ọ bụ rịọ arịrịọ. Dị njikere ịjụ ndị ahịa gị maka nnabata ha, tupu ị kpebie ime ka azịza ha bụrụ ọha, ọbụlagodi na nyocha ahụ amaghi.
Enwere sayensị zuru ezu emebe ezigbo ajuju, na-ezere azịza ndị na-ezighị ezi, ma jikwaa ime ka azịza na-akwụwa aka ọtọ nke ndị na-esonye na nyocha ahụ. Na nwute, enwere ọtụtụ ihe ga - emetụta azịza ndị ahịa gị, imirikiti n'ime ha karịrị njikwa gị. Dabere na ozi ị na-achọ inweta, ị nwere ike ịjụ ha maka nzaghachi ozugbo ahụmịhe ịchọrọ ịlele. Nzaghachi ndị ahụ ga-abụrịrị nke mmetụta uche ebe ọ bụ na ndị sonyere ga-echeta nke ọma ahụmịhe ha. N'ihi ya, mmetụta ndị ha jikọtara na ya ka na-emetụta ha.
Y’oburu na ichoro ozi ebumnobi kariri, ị kari inye ndi ahia gi oge tupu ichoputa ha. Nke a na-enye ha ohere inyocha ọnọdụ ahụ nke ọma karịa. Azịza ha na-enye agaghị abụ ezigbo ebumnuche n'ezie, mana nke a abụghị ihe ị nwere mmasị n'ụzọ ọ bụla. Ndị ahịa gị kwesịrị inwe afọ ojuju, nke mbụ, yana afọ ojuju abụghị ebumnuche.
Ogologo Ahịa Ndị Ahịa
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta ọtụtụ ihe na nyocha gị, emela ajụjụ ọnụ na-aga maka ibe na ibe. Ndị ahịa gị nwere ike ịgwụ, ma bido zaa n’echeghị ajụjụ ndị ahụ n’ezie, ka emee ya. Kwesịrị, gị nnyocha e mere kwesịrị nwere ihe karịrị 30 ajụjụ n'elu. O gha ewe ihe dika nkeji ise iji mezue ya.
Ọ bụrụ n’inwere ajụjụ karịrị iri atọ ị ga-ajụ, maọbụ ọ bụrụ n’ajụjụ a ga - ewe ihe karịrị nkeji ise iji zaa ya, tụlee imebi ndepụta nke ajụjụ n’ime ọtụtụ nyocha. Kpo ha dika isiokwu ha si di, ka imata ihe ichoro.
Ọnọdụ Nnyocha Ndị Ahịa
Nddị na mmasị dị iche iche na-agbanwe na ọsọ ọsọ ọsọ, yabụ ị kwesịrị iduzi nyocha mgbe niile ị nwere ike. Nke a na-enye gị ohere ịtụleghachi etu esi arụ ọrụ nke ajụjụ gị, yana ịtinye ajụjụ a hapụrụ na mbụ.
Nwere ike ịchọrọ ịnwe nyocha sara mbara nke na-adị mgbe niile na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ gị, iji nyochaa afọ ojuju nke ndị ahịa gị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Mana ọ bụrụ na ị na-achọ nzaghachi akọwapụtara nke ọma, elebara anya n'otu isiokwu, karịa ka ị kwesịrị ịkpọsa nyocha ahụ iche.
Ajụjụ Ndị Ajụjụ Na-ajụ Ajụjụ
Ajuju doro anya ma o bu ajuju ajuju puru ime ka ihe esi n’onyocha gi pụta. Ekwesiri iji oge nke onye soant na elekwasị anya na azịza ya, ọ bụghị ihe ajụjụ ndị a pụtara. N'ọnọdụ nke ajụjụ ndị ahụ na-edochaghị anya, onye so na ya nwere ike ịchọ ịhọrọ azịza na-enweghị usoro. Na nke a nwere ike ịmepụta usoro nduhie.
Karịa nke ahụ, ndị ahịa gị nwere ike ịhapụ naanị nyocha ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ha achọpụta na ajụjụ ndị ahụ bụ ihe a na-apụghị ịghọta. Ha kwesiri ịdị ha ka ha anaghị etinye oge pere mpe iji mejupụta ajụjụ a, yabụ ha ga-enwe mmasị ịza ajụjụ ọ bụla nke ọma.
Ahịa Survey Ajụjụ njikarịcha
Enwere ọtụtụ ihe ga - emetụta ụzọ ndị ahịa gị si aza ajụjụ nyocha gị. Fọdụ nwere ike ịdị aghụghọ dịka ụzọ i si kwuo otu ajụjụ, ma ị na-eji okwu ma ọ bụ na ị naghị eji ha nwere ike inwe echiche na-adịghị mma metụtara ha yana ọbụlagodi usoro ị jụrụ ajụjụ ahụ.
Maka nsonaazụ kacha mma, nsonaazụ ndị ọzọ na-enye nkọwa, ị ga-achọ inwe ọtụtụ mgbanwe n'ụzọ ị ga-esi wuo akwụkwọ ajụjụ gị. You nwere ike ịjụ otu ajụjụ n'ọtụtụ ụzọ, iji zere ajọ mbata dabere na okwu na ahịrịokwu, na ị ga-atụlekwa ịgwakọta usoro ị jụrụ ajụjụ gị.
Maka ajụjụ nwere ọtụtụ azịza ị họọrọ, tụlee ịmegharị nhọrọ ndị a. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ezere ịtọ ụdị usoro maka ndị ahịa gị, ị ga-amanyekwa ha ka ha chee echiche banyere ajụjụ ọ bụla n'otu n'otu.
Ahịa Survey wardsgwọ Ọrụ
Ọ bụrụ n’ịchọpụta na ndị ahịa gị na-ala azụ iwere nyocha gị, tụlee ịnye ha obere ọgwụgwọ mgbe ha mechara. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji nke a iji gbaa ndị ahịa ha ume ịza.
Agbanyeghị, ịnwere ike ịnwe ihe egwu nke ime ka ndị mmadụ were nyocha ahụ maka ụgwọ ọrụ, na -enweghị n'ezie ka gị na ụlọ ọrụ gị nwee mmekọrịta. Dị njikere ịtinye usoro nkwenye ụfọdụ, iji chọpụta ma ha maara ihe ha na-ekwu maka mgbe ị na-aza ajụjụ gị. Survefọdụ nnyocha chọrọ ka ị jupụta na ozi nke a na-ebipụta na nnata. Nwere ike ịgbakwunye mmapụta na ebe nrụọrụ weebụ gị, ndị a na-egbu oge ịga mgbe emechara ụfọdụ ihe, dị ka ịlele na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ma ọ bụ mgbe etinyere otu njikọ.
Gbaa Nzaghachi zuru ezu
Na nyocha ọ bụla, n'agbanyeghị ozi ị na-achọ, ọ bụ nke kachasị mkpa na ị na-enye ndị ahịa gị ohere ikwu okwu ha. Nkọwa zuru ezu nwere ike ịba uru dị ukwuu karịa ajụjụ ndị na-enye nhọrọ n'etiti ọtụtụ azịza.
Ihe nyocha nile bụ ịchọpụta ihe ịmaghị banyere ndị ahịa gị. Ajuju na azịza nke etinyere site n’aka gi ka akacha nma mgbe inwere mmasi ichota ihe putara ihe, nke n’enyeghi otutu nuances.
Nkwupụta nwere ike ịnye gị nghọta nke ị na-agaraghị ebu amụma ya ma ọ bụghị. O di nwute, o siri ike ime ka ndi ozo tinye oge ha na ede ederede ogologo oge karie inye ha nhọrọ ka ha tinye igbe. Yabụ, n'agbanyeghị na ị na-achọ azịza zuru ezu, debe ajụjụ dị mfe, yabụ na ha echeghị na ha na-emefu oke azịza ya.
Nyocha nwere ike ịbụ ngwá ọrụ bara ezigbo uru ma a bịa n'ịlele ọkwa afọ ojuju ndị ahịa, yana ịkọ ọdịnihu. Ọ na - akwalite ntụkwasị obi onye ahịa gị ma gosipụta ha na ị nwere ezigbo mmasị na ha, yana mmasị na ntinye ha.
Tags: ahịa nnyocha ogologoahịa nnyocha onyinyenjikarịcha nyocha ndị ahịaajụjụ ndị ahịa ajụjụnyocha ndị ahịanyocha ndị ahịannyocha e mere
Mike Jones bụ onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Boston, yana MS na Mass Communication. Ọ bụ ugbu a onye edemede oge niile, na-anụ ọkụ n'obi banyere ihe niile metụtara azụmahịa na teknụzụ.
Digimind: Nchịkọta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi maka priselọ Ọrụ